WARARKII AGOOST 1::
Beesha Cabdi Koombe oo Baaq Kale u Dirtay IGAD
Bootaan Barre: IGAD haka laabteen go'aan koodii Khaldanaa ee Qaybinta Xubnaah Baarlamaanka Beesha Daarood
Beesha Cabdi Koombe (Jambeel) waxa ay mar labaad ugu baaqayaan guddiga Fulinta IGAD in ay ka laabtaan go'aankii aan caddaalada ku dhisnayn ee ay xubnaha baarlamaanka ugu qaybiyeen beelaha Daarood. Go'aan kaas oo haddii aan laga noqon Soomaaliya u hor seedi doona xaq-darro hor leh. Go'aankaas oo aan qoraalkii hore ku cambaaraynay.
Waxaan IGAD iyo beesha caalamka mar kale xusuusineynaa in haddii baarlamaaka ay qorsheeyeen uu sidaas ku hir galo ay macneedu tahay in aan IGAD rabin in Soomaaliya ay ka dhalato dawlad caadil ah oo ay Soomaalidu ku qanacsan yihiin. Sidaas daraadeed IGAD waa in ay ka fiirsdaan meelmarinta go'aankaas khaldan. Waxaana IGAD u furan oo keliya in ay go'aankaas ka laabtaan, soona agaasimaan hab ay ku qanci karaan dhammaan beelaha Soomaaliyeed.
Soomaaliya heerka ay maanta joogto waxaa gaarsiiyay waa caddaalad darro. caddaalad darradii oo mar kale la hir geliyaana waa khasaare hor leh oo aan la aqbali karayn. IGAD haddii ay qabiil wax ku qaybinayaan waa in ay ka run sheegaan, oo si siman qabaa'ilada Somaaliyeed wax ugu qaybiyaan. Haddii ay IGAD taas diidaan, markaas waxaa loo qaadan doonaa in ay kharash iyo waqti badan ku bixiyeen arin aan dhinacna u dhaafayn madasha shirka Kenya, waa arin aan Soomaaliya haba yaraatee ka socon doonin, haddii ay hir geliyaana ay xididada u aaseen caddaalad darro qoto dheer oo hor leh - Ogaadaana taas dambe ma ahan mid ay beesha Cabdi Koombe (Jambeel) aqbali doonaan.
ENGLISH VERSION: Abdi Kombe (Jambeel) Clan Rejects the Unwise & Unfair Distribution of the Darod MPs [.doc]
Af-hayeenka Beesha Cabdi Koombe (Jambeel)
Beesha Cabdi Koombe oo Cambaarayn Kulul Dusha uga Tuurtay IGAD
WARARKII JULY 31